भारतको नाम उच्चारण गर्दै पुटिनले सुनाएको यो निर्णयले मोदी तनावमा, नेपालसम्मै तरंग ! – Annapurna Post News
भारतको नाम उच्चारण गर्दै पुटिनले सुनाएको यो निर्णयले मोदी तनावमा, नेपालसम्मै तरंग !
June 11, 2022 sujaLeaveaComment on भारतको नाम उच्चारण गर्दै पुटिनले सुनाएको यो निर्णयले मोदी तनावमा, नेपालसम्मै तरंग !
मस्को । रुस–युक्रेन तनावमा मौकामा चौका हानेको भारतलाई झड्का लाग्ने भएको छ । रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सरकारको कदमपछि नरेन्द्र मोदी सरकारलाई तनाव हुने हुने देखिएको हो । यसको तरंग नेपालसँगै पुग्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि धेरै युरोपेली देशले रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाए । बिक्री कम भएपछि रूसले केही देशलाई छुट दिएर सस्तो दरमा तेल बेच्न थाल्यो । यो मौकामा भारतले रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल किन्दै आएको छ ।
रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार दुई भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूबीच रुसको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी रोजनेफ्टबाट तेल किन्न वार्ता भइरहेको थियो। तर, अहिले रुसी तेल कम्पनीले यी भारतीय तेल कम्पनीसँगको सम्झौतालाई बीचैमा रोकेको छ । रुसी तेल कम्पनी रोजनेफ्टले अन्य ग्राहकको तेल आपूर्तिको माग पूरा गर्न यो कदम चालेको स्रोतले जनाएको छ । वास्तवमा, रोजनेफ्टले यी तेल ग्राहकहरूलाई तेल आपूर्ति गर्ने वाचा गरेको थियो। अब रुससँग भारतीय कम्पनीहरूलाई बेच्ने तेल छैन।
रुसी कम्पनीसँग यो आपूर्ति सम्झौता नभएमा भारतीय कम्पनीले स्पट मार्केटबाट महँगो तेल खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ । युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर त्यसको बाबजुद पनि रुसले आफ्नो तेल मजासँग बिक्री गरिरहेको छ ।
यस वर्षको सुरुमा तीनवटा भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरू इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन (बीपीसीएल) र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) ले रूसबाट सस्तो मूल्यमा तेल किन्न रोजनेफ्टसँग वार्ता सुरु गरेका थिए।
यसअन्तर्गत रुसबाट ६ महिना तेल आपूर्ति गर्ने सम्झौता हुने थियो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी इन्डियन आयलले रोजनेफ्टसँग सम्झौता गरेको छ । यसअन्तर्गत रुसी तेल कम्पनीबाट हरेक महिना ६० लाख ब्यारेल तेल खरिद गरिने छ । यससँगै ३० लाख ब्यारेल थप तेल खरिद गर्ने विकल्प पनि खुला छ ।
यसबाहेक रुसी कम्पनीले भारतका बाँकी दुई सरकारी तेल कम्पनीको तेल किन्नको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ । स्रोतहरू भन्छन्, रोजनेफ्टको एचपीसीएल र बीपीसीएलसँग तेलको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता छैन। यी कम्पनीहरुले आफूसँग तेल नरहेको बताउँछन् ।
इन्डियनआयलसँगको सम्झौता अनुसार भुक्तानी सबै प्रमुख मुद्राहरू रुपैया, डलर र यूरोमा हुनेछ। यो लेनदेनको समयमा भुक्तानी संयन्त्रमा निर्भर हुनेछ। रुसले आफ्नो पूर्वी बन्दरगाह कोज्मिनोबाट तेल निर्यात बढाएको छ। एसियाली मुलुकबाट बढ्दो मागका कारण यस्तो भइरहेको हो । रोजनेफ्टले एभरेष्ट इनर्जी, कोरल इनर्जी, बेलाट्रिक्स र सनराइज मार्फत बजारमा तेलको आपूर्ति बढाएको व्यापार स्रोतले जनाएको छ ।
भारतले अब ठूलो छुटमा रुसी तेल नपाउने भारतीय स्रोतले बताएको छ । रुसले अब भारतलाई ठूलो छुटमा तेल बेच्ने छैन। अर्को स्रोतले भन्यो, ‘पहिले भारतीय तेल कम्पनीहरूले रुसबाट ठूलो छुटमा तेल लिने गर्थे तर अहिले त्यस्तो छैन ।’ रुसले ठूलो छुटको अफर घटाएको छ र अब भारतले त्यस्तो छुटको फाइदा पाउने छैन। यसको कारण बीमा र ढुवानी भाडामा भएको वृद्धि हो । गत हप्ता युरोपेली संघले रूसी तेल ढुवानी गर्न नयाँ बीमा सम्झौताहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री बजारमा युरोपियन युनियनको प्रभुत्व छ।
तेल ढुवानीको बिमा नहुँदा भारतीय तेल कम्पनी इन्डियन आयलमा असर पर्ने स्रोतको भनाइ छ । इन्डियन आयलले गत वर्ष रोजनेफ्टसँगको सम्झौताअनुसार रुसी तेल खरिद गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार भारतले रुसी तेल युराल ठूलो मात्रामा किन्ने गरेको छ । भारतीय तेल कम्पनीहरूले स्पट बजारबाट तेल किन्ने क्रम जारी राख्नेछ। एचपीसीएल र बीपीसीएलले जुलाईमा रूसबाट करिब १० लाखदेखि २० लाख ब्यारेल तेल लिन सक्नेछन्। एजेन्सीको सहयोगमा
जी–बबले दिए आफ्नै आमाबुबाविरुद्ध उजुरी, आमाबाबुलेपनि उनीविरुद्ध मुद्धा किन हाले ?
अनुहारमा यति धेरै प्वाल पारे कि फेरी कसैले उछिन्न नसक्ने गरी नाम गिनिज वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता गरे
केबुलकारमा फसेका मानिसको अझै उद्धार सकिएन : २ जनाको मृ
मलेसियाको निर्णयले नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई धक्का
June 26, 2022 suja
आज मतदान गर्ने दिन, एक लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा